By Uhlaziyo lweMedia; Ukuhlaziywa ngu-Varixcare.cz. Igqityelwe ukuhlaziywa ngoJuni 12, 2021.
Ubungqongqo kwisandla esinye okanye sobabini buchaza ukulahleka kwemvakalelo okanye imvakalelo esandleni sakho okanye eminweni. Rhoqo, unokuba namava okuba ndindisholo ezandleni zakho kunye nolunye utshintsho, njengezikhonkwane kunye neenaliti zokuva, ukutshisa okanye ukurhawuzelela. Ingalo yakho, isandla okanye iminwe inokuziva ngathi iyaxakaniseka okanye ibuthathaka.
Ubungqindilili bunokwenzeka ecaleni kwentliziyo enye kwisandla esinye, okanye kunokwenzeka ngokulinganayo kwizandla zombini.
citalopram hydrobromide 20mg iipilisi
Ukuba ndindisholo kwesandla kunokubangelwa ngumonakalo, ukucaphuka, okanye uxinzelelo lomnye wemithambo-luvo okanye isebe lenye yeemithambo engalweni nasesihlahleni.
Izifo ezichaphazela imithambo-luvo yomda, njengesifo seswekile, nazo zinokubangela ukuba ube ndindisholo, nangona unesifo seswekile, iimpawu ezifanayo zihlala zivela ezinyaweni zakho.
Ngokungaqhelekanga, ukuba ndindisholo kunokubangelwa yingxaki kwingqondo yakho okanye kumqolo womqolo, nangona kunjalo kwimeko yengalo okanye ubuthathaka besandla okanye ukuphulukana nomsebenzi nako kuyenzeka. Ubungqindilili bodwa abuhlali bunxulunyaniswa nokuphazamiseka okusongela ubomi, njengemivumbo okanye amathumba.
Ugqirha wakho uya kufuna ulwazi oluneenkcukacha malunga neempawu zakho zokuchonga unobangela wokuba ndindisholo. Zininzi iimvavanyo ezinokufuneka ukuze kuqinisekiswe unobangela ngaphambi kokuba kuqale unyango olufanelekileyo.
Izizathu ezinokubangela ukuphazamiseka kwisinye okanye zombini izandla zibandakanya:
Ingqondo kunye neemeko zenkqubo yovalo
I-spondylosis yomlomo wesibeleko
Iiparaneoplastic syndromes zenkqubo yeemvakalelo
Ukulimala kwentambo yomqolo
Ukulimala okanye ukwenzakala ngokweqile
Ukulimala kwe-plexus yeBrachial
Isifo seCarpal tunnel
ICubital tunnel syndrome
Ukusetyenziswa kotywala kotywala
Iziphumo ebezingalindelekanga zekhemotherapy okanye iziyobisi ze-HIV
Ukusilela kweVitamin B-12
Kubalulekile ukumisela unobangela wokubhabha kwesandla. Ukuba ukuphazamiseka kuyaqhubeka okanye kusasazeka kwamanye amalungu omzimba wakho, nxibelelana nogqirha wakho kuvavanyo.
Ngaba i-antibiotics ingabangela urhudo
Unyango lokuba ndindisholo ezandleni zakho luxhomekeke kwisizathu esingunobangela.
Tsalela umnxeba ku-911 okanye ufumane uncedo lonyango olungxamisekileyo ukuba ubundindisholo:
Iqala ngequbuliso, ngakumbi ukuba ihamba nobuthathaka okanye ukukhubazeka, ukudideka, ubunzima bokuthetha, isiyezi, okanye ngesiquphe, intloko ebuhlungu.
Cwangcisa utyelelo lweofisi ukuba ubundindisholo:
Iqala okanye isiba mandundu ngokuthe ngcembe kwaye iyaqhubeka
Ukusasazeka kwamanye amalungu omzimba wakho
Ichaphazela omabini amacala omzimba wakho
Kubonakala kunxulumene nemisebenzi ethile okanye imisebenzi, ngakumbi ukuphindaphinda kwesindululo
Ichaphazela kuphela inxenye yesandla sakho, njengomnwe
indlela yokongeza indlela emfutshane kwidesktop
Iindleko ze-rybelsus ngaphandle kwe-inshurensi
ungayithatha i-oxycodone nge-tramadol
advair diskus 250 amaxabiso ama-50
vavanya izithethi zasekhohlo nasekunene
ingakanani i-benadryl ikhuselekile